#ILOVEPIVX Valentines Day Contest | PIVX
Uthando lusemoyeni! Usuku lwe-Valentines lusekupheleni kwekona kwaye yintoni enye indlela engcono yokuyibhiyozela kwaye ibonise uthando lwethu kumphakathi wethu we-PIVX, kunokuba wenze i-Heart ye-Valentine Day Contest! Nali ithuba lakho lokukhanyela kwaye usebenzise ingcamango yakho, ungakhankanyi ukwabelana nothando lwakho lwePIVX.
Nazi iindlela ezintathu:
Inyathelo 1: Khetha enye okanye wenze YONKE yale mi sebenzi emithathu:
Thatha isithombe sakho kunye / okanye abanye abonisa uthando lwe-PIVX!
Bhala kwaye uthumele ‘Uthando lwencwadi ku-PIVX’!
Sixelele indlela osebenzisa ngayo iPF yakho (i-Universal Purple Flow) ehlabathini!
Nazi ezinye iimbono:
– Thatha umfanekiso owembethe iingubo zePIVX.
– Thatha isithombe sekhadi likaValentine ozenzelayo owenzela i-PIVX.
– Thatha isithombe sakho kunye nothando lwakho lokutya kunye nokusebenzisa i-PIV okanye uhlale ekhaya uze ugubha ngokubomvu.
– Bhala imbongo okanye i-Haiku malunga nothando lwakho lwe-PIVX.
– Bhala incwadi yothando ku-PIVX.
– Bhala ibhulophu emfutshane malunga nomhlobo osandul ‘uyenzile ngenxa yothando lwakho lwabelwana ngalo ngePIVX.
– Buza uthando lwakho lokwenene ukutshata nawe kwi-Discord yethu!
Sebenzisa ingcinga yakho emangalisayo !!! Kukho iindlela ezininzi zokubonisa uthando ongenakukwazi ukubabiza ngabo bonke! Sisimangalisa!
Isinyathelo 2: Yabelana nathi kunye nomphakathi we-PIVX:
Fumana ipost yethu yePIVX Valentines Day ‘Contest’ kwi Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest kunye ‘Like’ it.
Layisha isithombe okanye oko wabhala kwaye uyithumele ngqo phantsi kwe-‘PIVX Valentines Day Contest ‘, okukhankanywe ngasentla. FUNEKA uqinisekise ukuba uthayipha i-hashtag ‘#ILovePIVX’ ngokungena kwakho. Kumele ube ngumlandeli we-PIVX kwama-akhawunti aseburhulumenteni akhankanyiweyo ngasentla.
!Inyathelo 3: Khuthaza iposi lakho kwaye uvote!
Abanqobileyo abayi-10 baya kukhethwa ngeemali ezili-10 ezimangalisayo zePIV. Abanqobileyo baya kukhethwa ngumlinganiselo ophezulu wevoti ezigcinwe kuwo ngamnye ukungena. La mavoti aya kwenziwa ngumbutho we-PIVX kwi-Discord, usebenzisa i-poll. Ewe, unokuvota ukuze uqiniseke ukuba ujoyine i-Discord yethu!
Ude ufike ekupheleni kweSuku lweValentines ukuze ufake ukungena kwakho! Ukufakwa kwamanani amaninzi ngePivian kuvunyelwe, kodwa kuphela enye nenani eliphakamileyo lamavoti liya kufaneleka kwi-PIV. Ngomhla we-15 siya kubutha zonke izibhengezo kwaye siqale i-poll kwi-Discord. Ngomhla we-16 siya kuzisa bonke abaphumeleleyo aba-10!
Umyalezo okhethekileyo kubo bonke abantu bethu be-PIVX kwi-Fancorps: Gcina iso elithile ukuze wenze umsebenzi omtsha ukuze ufumane ezinye iikhredithi!
Ukumbiwa Kwisisongelo esibi kakhulu kwi-Crypto, kodwa i-PIVX isele iZiqendu ezintathu ngaphambili
Ukunyaniseka kwe-PIVX Coin Supply
Ushwankathelo wenyanga ye-PIVX : Meyi 2018